Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0412 zom
Zoma 27 Jolay
“Nandritra ny nipetrahan’i Paoly tany Korinto, dia nahafaly dia nahafaly azy tokoa ny fahatongavan’i Silasy sy Timoty avy tany Makedonia. Nitondra ‘vaovao mahafaly’ ny amin’ny ‘finoana sy ny fitiavan’’ ireo izay nanaiky ny fahamarinana tamin’ny dia voalohany nataon’ireo mpitondra hafatry ny filazantsara tany Tesalônika izy ireo. Naneho fitiavana sy firaisam-po tamin’ireo mpino, izay nijanona ho mahatoky tamin’ny fahamarinana teo anivon’ny fitsapana sy ny fahoriana i Paoly. Niriny mafy raha ny tenany mihitsy no hamangy azy ireo, nefa satria tsy azo natao izany tamin’izay, dia nanoratra ho azy izy.
“Naneho ny fankasitrahany an’Andriamanitra ny apostoly tao amin’ity taratasy ho an’ny fiangonana ity, noho ireo vaovao mahafaly milaza ny fitomboan’ny finoany (...)
“‘Misaotra an’Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin’ny fivavahanay, sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin’ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin’ny fitiavana sy ny faharetanareo amin’ny fanantenana an’i Jesosy Kristy Tompontsika eo imason’Andriamanitra Raintsika.’ “Betsaka ireo mpino tany Tesalônika no ‘niala tamin’ny sampy mba hanompo an’Andriamanitra velona sady marina’ (...) Nilaza ny apôstôly fa ‘tonga fianarana ho an’ny mino rehetra any Makedonia sy Akaia’ izy raha ny fahatokiany teo amin’ny fanarahana ny Tompo.” - VM, tt. 223,224.
• Diniho misimisy kokoa ilay resaka hoe môdely alain-tahaka ankoatra an’i Jesôsy. Inona avy ireo tombontsoa sy fatiantoka mikasika izany?
• Saiky fisaorana an’Andriamanitra noho ny amin’ny Tesalônianina no nibahana tao anatin’ny taratasin’i Paoly. Inona no tokony ho anjara asan’ny fisaorana eo amin’ny fanandramana ara-pivavahana ataonsika, na ho an’ny isam-batan’olona io na ho an’ny daholobe?
• Inona no ho hitan’ny manodidina eo aminao raha toa ka mitady porofo maneho ny finoan’ny fiangonanao izy ireo? Inona no azo atao na tokony hatao mba hisian’ny fiovana?
• Nahoana no tena ilaina tokoa ny fankasitrahana avy amin’ny hafa? Nahoana anefa no tena ilaina indrindra ihany koa ny mitandrina eo am-panaovana izany?
• Saintsaino indray ny antony maha-zava-dehibe ny foto-pampianarana mikasika ny fiverenan’i Jesôsy ho an’ny finoantsika. Inona avy ireo antony lehibe tokony hananantsika toky mikasika ny zavatra izay tena marim-pototra tanteraka, ary tsy mitovy velively amin’izay efa nitranga tany aloha?
Famintinana: Be tokoa ny fifalian’i Paoly raha velom-pankasitrahana an’Andriamanitra izy noho ireo porofo sesehena mikasika ny asany, hitany teo amin’ny fiainan’ireo mpino Tesalônianina. Raha nizara ny votoatin’ny fivavahany tamin’izy ireo i Paoly, dia nanantena fa hampirisika azy ireo hitombo finoana sy hitombo eo amin’ny fiezahany hitaona ny hafa izany.